Otu esi etinye Tor Browser na Fedora 34 - LinuxCapable
October 20, 2021 September 20, 2021 by Jọshụa James
Usoro 1. Wụnye Tor Browser na Fedora Repository
Wụnye ma hazie Tor Browser
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye ihe nchọgharị Tor kacha ọhụrụ na Fedora 34.
Na ndabara, Tor Browser dị na ebe nchekwa Fedora. Nke a bụ ụzọ kacha mfe iji wụnye Tor.
Nyochaa ma arụnyere Tor nke ọma, jiri iwu -ụdị:
Ekele, Tor Browser, arụnyere na sistemụ Fedora gị; gaa usoro 2 wee malite ngalaba Tor Browser.
Biko mara na iji Tor ekwesịghị ịbụ ihe mkpali ma ọ bụ nhọrọ iji webụ ma ọ bụ ọrụ gbara ọchịchịrị na-emebi iwu obodo ọ bụla.
Categories Fedora Tags Fedora 34, Ihe nchọgharị TOR Mail igodo